यो जो अनलाइन मा प्ले गर्न सकिँदैन एक स्लट छ स्लट कुनै जम्मा मोबाइल र Microgaming द्वारा जारी छ. यो स्लट तपाईं यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न एक मौका एक करोडपति गरेको जीवन शैली को एक अनुभव दिन्छ. को प्रस्ताव लक्जरी प्रतीक र सरल बोनस सुविधाहरू साथ, this online स्लट कुनै जम्मा मोबाइल has become the best mode to sneak few light moments from your busy schedule to experience the wealthy states.
विलासिता धन को जीवन संग प्रस्ताव
यो तीन पङ्क्ति र तीस निश्चित paylines संग एक पाँच रील स्लट रूपमा आउँछ. नेपथ्यमा, तपाईं जो रातो-rimmed छ कि एक फ्रेम भित्र स्पिन को cheery रील नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. यो एक भोजन कक्ष को पर्खाल मा आकर्षक वालपेपर केही प्रकारको एक नजर दिन्छ.
यो अनलाइन स्लट कुनै जम्मा मोबाइल प्रतीक को विभिन्न प्रकार प्रदान गर्दछ. को स्लट को मुख्य प्रतीक आधारभूत विषय समर्थन छन्. पाँच तिनीहरूलाई बाहिर यस्तो निजी जेट संग खडा रूपमा धेरै स्थानहरू मा एक केटी विशेषताहरु, वा क्यासिनो मा, छिटो कार मा, केही नौका मा र एक गोल्फ क्लब मा एक ककटेल sipping. यो संग, तल्लो मूल्य प्रतीक साथै रचनात्मक डिजाइन. तिनीहरूले एक जेट समावेश, एक नौका,aposh car, एक सामान केही क्रमबद्ध, एक पासपोर्ट र केही घाम.
यस बाहेक, the slot offers some special symbols as well. धन लोगो को जीवन तिनीहरूलाई को एक छ र यो स्लट खेल को जंगली प्रतीक भनिन्छ. यो ग्रह स्क्याटर बाहेक सबै प्रतीक लागि 2x र विकल्प कुनै पनि जीत गुणन गर्न सक्नुहुन्छ. को स्लट को स्क्याटर प्रतीक को रील भन्दा स्ट्याक छ.
तपाईंको डलर गुणन
यो स्लट रूपमा अरूलाई तुलना धेरै रचनात्मक सुविधाहरू प्रदान गर्दैन तर तपाईं स्लट को पनि जटिल प्रकारको रुचि छैन, तपाईं जहिले पनि फिर्ता यो एक आउन सक्दैन. र तपाईं एक शुरुवात हो भने, त्यसपछि यो अनलाइन स्लट कुनै जम्मा मोबाइल लागि बस बनेको छ, तपाईं प्ले गर्न कुनै पनि पूर्व निवेश गर्न आवश्यक छैन रूपमा.